တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကြီးကို ဗေဒင်၊ ယတြာ အားကိုးပြီး ကျော်ဖြတ်ကြမှာလား - Yangon Media Group
ဆရာ ဖဂျက်ရီ တင်အုန်း (ရန်ကုန်စက်မှု တက္ကသိုလ်)
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့်ကျင်းပမည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကြီးကား ရက်အနည်းသာလိုပါတော့သည်။ အချို့ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ကျောင်းစာသင်နှစ်စကတည်းက စနစ်တကျအချိန်ဇယားနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည့်အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကြီးတွင် အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြပါပြီ။ အချို့ကျောင်းသားကျောင်းသူများ hot spot မေးခွန်းနောက်လိုက်နေကြသည်။ အချို့လည်း ”ဘယ်လူကြီးရဲ့မြေး၊ ကျိတ်ဝိုင်းကျူရှင်”က၊ ခန့်မှန်း မေးခွန်းက လာမယ့်စာမေးပွဲကြီးမှာ အနည်းဆုံးဘယ်နှမှတ်ဖိုး ကြိမ်း သေပါမယ်”ဆိုပြီး မိတ္တူကူးယူသင်ပေး၊ သင်ယူလုပ်နေသူတွေကလည်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်လို မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာ မရေတွက်နိုင်အောင်ပင် များပြားလွန်းလှသည်။ ဗေဒင်၊ ယတြာ၊ မန္တရားဆရာများကလည်း မြန်ပြည်တစ်ဝန်း နေရာပေါင်းစုံမှ အလျှိုလျှိုထွက်ပေါ်လာနေကြသည်။ ထိုဆရာသမားတို့အားဆက်သရ သော အလှူငွေကြေး၊ ဥာဏ်ပူဇော်ခကြေးများကလည်း မနည်းလှ ချေ။ ”လူနာမျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေ”ဆိုတဲ့စကားကလည်း အခုလို စာမေးပွဲရာသီ အချိန်မျိုးတွင် ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မှန်နေသလိုမျိုး စာရေးသူခံစားနေရသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးသိမ်းကြီးကလည်း ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် နေ ပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့နယ် အထက(၂) ကျောင်းတွင်ပြုလုပ်သော တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ စာစစ်ဌာနကြီးကြပ် ရေးမှူး၊ တွဲဖက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့် စာပြုသူများလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲသင်တန်းတွင် ”တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲသည် အမှားမခံ၊ မေးခွန်းပေါက်ကြား၍မရ၊ အမှတ်ကို အောင်လျှင်လည်း လျှော့၍မရသလို မအောင်၍လည်းတိုး၍မရ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း တစ်သဝေမတိမ်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ စာမေးပွဲလုပ်ငန်း တွေသည်သိလို့မှားမှား၊ မသိလို့မှားမှား မှားတယ်ဆိုရင် အရေးယူတယ်ဆိုတာကို အင်မတန် သတိထားဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုကြောင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ညွှန်ကြားထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေဘက်က မူအတိုင်းပဲရပ်တည်လို့ရကြောင်း၊ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဆောင်ရွက်လို့မှားသွားခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်လို့မရဘူးဆိုတာကို အလေးအနက်မှာကြားလိုကြောင်း၊ မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်၍ ရမှတ်တွေနဲ့ပတ်သက်၍ အဖြေလွှာစာ အုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ လုံးဝပေါက်ကြားလို့မရပါဘူး။ အောင်စာရင်း မထွက်ခင်အချိန်အထိ ပေါက်ကြားလို့မရပါဘူး။ စာမေးပွဲသည် မသမာမှုဖြစ်လို့မရဘူး။ စာမေးပွဲသည် သူ့ရဲ့အောင်လိုတဲ့အမှတ်ကိုလည်း အောင်သည်ထက် ပိုလျှော့လို့မရဘူး။ သူ့ရဲ့အမှတ်ကို မ အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ အောင်အောင်တိုးပေးလို့လည်းမရဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကလည်း သေသေချာချာပြင်ဆင်ထားပါ။ အဲဒီအတိုင်း တစ်သဝေမတိမ်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါလို့မှာ ကြားလိုပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်ကို စာရေးသူသတိပြုခဲ့မိပါသည်။
စာမေးပွဲအောင်မြင်ချင်စိတ်ဆန္ဒ လွန်ကဲသွားသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ၊ မိဘအချို့ကလည်း မိမိတို့အားကိုးရာ ဗေဒင်၊ ယတြာဆရာသမားများထံ ချဉ်းကပ်ကာ ထိုဆရာသမားများမှာ ကြားလမ်းညွှန်သည့်အတိုင်း ”တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကြီးဖြေဆိုမည့် ဘာသာရပ်ခြောက်ခုအတွက် မည်သည့်ဘာသာရပ် ဖြေဆိုသည့်နေ့တွင် မည်သည့်အရပ်ဘက်ကို မျက်နှာမူပါ၊ မည်သည့် နေ့တွင် မွေးဖွားသူသည် မည်သည့်နေ့တွင် မည်သည့်သစ်သီးကိုစားပါ၊ ဘယ်အကြော်ကိုစားပါ၊ ဘယ်ဖျော်ရည်ကို သောက်သွားပါ၊ ဘာမုန့်ကိုစားသွားပါ၊ ဘာပန်းကို ယူဆောင်သွားပါ၊ ဘယ်မှာတင်ပါ။ ဒီဘောပင်တွေနဲ့ဖြေဆိုပါ။ ဒီလို ဘောပင် တွေကို ဘုရားစင်ပေါ်မှာ တင်ထားပြီး စာမေးပွဲကြီးမဖြေဆိုခင် လုံးဝအသုံးမပြုဘဲ စာမေးပွဲကြီးစဖြေသည့်နေ့တွင် အသုံးပြုရန်၊ စာမေးပွဲဖြေရန် အိမ်ကစထွက်သည့်နေ့တွင် အသုံးပြုရန်၊ စာမေး ပွဲဖြေရန် အိမ်ကစထွက်သည့်အခါ ခြေလှမ်းဘယ်နှလှမ်း ရှေ့ ကိုလှမ်း၍ လက်ခုပ်ဘယ်နှချက်တီးပြီး ထွက်ပါ”စသည် စသည် ဖြင့် အခါတော်ပေးပြောဟော နေသူများကလည်းစုံလှပါသည်။
လောကတွင် ကံကံ၏အကျိုးသည် သွေးထွက်အောင်မှန်လှပါသည်။ သို့သော် လောကတွင် ”ကံ၊ ဥာဏ်၊ ဝီရိ ယတည်း”ဟူသော အဖော်မွန်သုံးဦးသည် ရိုးသား ကြိုးစားသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးသော မိတ်ဆွေစစ်များဖြစ်ကြသည်။ ကံကိုယုံပြီး ဆူးပုံပေါ်တက်နင်းလျှင် ဆူးစူးခံရမည်မှာ သေချာလှသည်။ ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာကြီးပီမိုးနင်းကလည်း ”ကံ ဟူသည် အလုပ်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ကိုကောင်းစွာလုပ်မှ ကံ၏အကျိုးကို မုချခံစားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း”ရေးသားခဲ့ဖူးသည်ကို စာရေးသူဖတ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ စာရေးသူ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်(RIT) (ယခု-အဆင့် မြင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကြို့ကုန်း) တက်ရောက်စဉ် ဗေဒင်ယတြာများနှင့်ပတ်သက်၍ စာရေးဆရာကြီး လယ်တွင်းသားစောချစ် ဟောပြောခဲ့ဖူးသော စကားလေးတစ်ခွန်းကို ပြန်လည်မျှဝေချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်မိပါသည်။ ဆရာကြီးက ”ကိုယ့်အကြောင်း၊ ကိုယ့်လောက် မသိတဲ့သူကို ကိုယ့်အကြောင်းကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ဟောပြောခိုင်းတဲ့ လူတွေဟာ အင်မတန်သနားစရာကောင်းလှတယ်”ဟူ၍ပြောခဲ့ ဖူးပါသည်။
လာမည့်စာမေးပွဲကြီးကို ကံစမ်းမဲသဘောထားက ”ပါရင် စံမည် မပါရင်ခံမည်”၊ ခပ်လွယ်လွယ် ခပ်ပေါ့ပေါ့ဖြေဆိုကြမည့် စာဖြေသူများကလည်း ဒုနဲ့ဒေး ရှိနေသည်ကို ဆရာတစ်ယောက်အနေနှင့် စာရေးသူသတိပြုမိသည်။ ”အနာမခံလျှင် အသာမစံရ” (No Pain,No Gain) ဟူသော အင်္ဂလိပ်စကားပုံသည် စိတ်ဓာတ်ခွန် အားကြီးမြတ်သူ၊ လုံ့လဝီရိယရှင်များ၏ လက်ကိုင်ထားရာ အောင်မြင်မှုသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားလောင်း မဟာဇနကမင်းသားသည် ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို အောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ ”ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယ”သူရဲကောင်းသုံးဖော်ကို မဟာမိတ်လုပ်ခဲ့သောကြောင့် အသက်ဘေးမှ လွတ် မြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် အစိုးရစစ် စာမေးပွဲကြီးတွင် ဖြေဆိုကြမည့် စာဖြေသူအပေါင်းအား နှစ် ၃ဝ ကျော်စာသင်သက်ရှိသည့် စာရေးသူအနေဖြင့် အထူးမှာကြားလိုသည်မှာ ”တကယ်ဖြစ်ချင်၊ တကယ်လုပ်ပါ၊ အဟုတ်ဖြစ်ပါမည်”။ မြတ်စွာ ဘုရားသခင်က ရွှေစကားမိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ ”မိမိကိုယ်သာ၊ အားထားရာ၊ မိမိကိုယ်သာ၊ ယုံကြည်ရာဖြစ်သည်”မိမိ၏ အနာဂတ်ပန်းတိုင်သည် မိမိလက်ဝယ်တွင်ရှိနေသည်ဟု ယုံကြည်ပြီး မကြာခင် ကျင်းပတော့မည့် အစိုးရစစ်စာမေးပွဲကြီး မဖြေဆိုခင် မိမိ၏ကိုယ်ပိုင် ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယကို အစွမ်းကုန် အသုံးချကာဖြေဆိုမည်ဆိုပါက အောင်မြင်မှု သရဖူကို ဆွတ်ခူးရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း လေးနက်စွာ အကြံပြုလိုက်ရပါသည်။ ။
''ခိုးတာကို ရိုးရာ မှတ်ပါလို့''
ထိုင်း တရားမဝင် လုပ်သားဖမ်းဆီးမှု ကင်းလွတ်ခွင့် နောက်ထပ်ခြောက်လ တိုးမြှင့်ပေးမည်ဟု သတင်းမျ
အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်တချို့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားမှု မကြာမီအြေ?
အစိုးရ သဘောကျသူသာ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဖြစ်လာနိုင်ဟု ယခင်ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်?
ဘေးလ်ကို စာချုပ်သက်တမ်းတိုးကာ စီရော်နယ်ဒိုနေရာတွင် အစားထိုးနိုင်ရန် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း ?
ကမ်းနားလမ်းတစ်လျှောက် ကွန်တိန်နာယာဉ်များစည်းကမ်းမဲ့မှုများကို တာဝန်ရှိသူများ ထိရောက်စွာအ